चीनमा वुहानपछिकै ठूलो संख्यामा फैलियो कोरोना संक्रमण » KhabarPati.net
१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार १७:३९ प्रकाशित
काठमाडौं । चीनमा पछिल्लो समय देखिएको कोरोना संक्रमण सबैभन्दा पहिला वुहान सहरमा फैलिएको संक्रमणयताकै ठूलो भएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।जुलाई २० मा चीनको नन्जिङ सहरको विमानस्थलमा एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म दुई सय जनामा कोरोना संक्रमण देखिइसकेको छ । नान्जिङबाट आउने सबै उडानहरु अगष्ट ११ सम्मको लागि रद्द गरिएको ग्लोबल टाइम्सले बताएको छ ।
अहिले नान्जिङ सहरमा संक्रमण रोक्न नसकेको भन्दै आलोचना भएसँगै सहरमा परीक्षण व्यापक बनाइएको छ । चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार उक्त सहरका ९३ लाख मानिसको कोरोना परीक्षण गरिने भएको छ । यो सहरमा भ्रमणको लागि आएका मानिसको पनि कोरोना परीक्षण गरिनेछ ।अधिकारीहरुका अनुसार अहिले फैलिएको संक्रमणको प्रमुख कारण डेल्टा भेरियन्ट हो । विमानस्थलमा मानिसको अत्यधिक भिडभाडको कारण कोरोना संक्रमण बढेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
चीनमा नयाँ संक्रमण फैलिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरुले चिनियाँ कोरोना खोपमाथि आशंका व्यक्त गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय भेटिएका कोरोना संक्रमितले खोप लगाएका थिए वा थिएनन् भन्ने खुलेको छैन ।चीनले आफ्नो मुलुकमा विभिन्न योजना प्रयोग गर्दै संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुक्रबारदेखि सबै शाखा सञ्चालन गर्ने
५. स्वादिलो र पौष्टिकताले भरिपूर्ण ”निगुरो”